Mpiasa iray maty, telo naiditra hopitaly noho ny lozam-pamokarana nokleary any Espaina
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Espaniola » Mpiasa iray maty, telo naiditra hopitaly noho ny lozam-pamokarana nokleary any Espaina
Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Vaovao Mafana Espaniola • News sustainability • teknolojia • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Toby nokleary Ascó any Catalonia, Espaina
Ny ozinina Ascó dia nohadihadiana noho ny fiparitahan'ny taratra tao amin'ny réactor Unit 1 tamin'ny Novambra 2007.
Vondrona mpamono afo fito sy fiara vonjy taitra ara-pitsaboana efatra no nentina haingana tany amin'ny toby nokleary Ascó Katalonia, Espaina anio alina tokony ho tamin'ny 7 ora tany an-toerana taorian'ny fiparitahan'ny gazy karbonika lehibe tao amin'io trano io.
Namoy ny ainy ny iray tamin'ireo mpiasa voakasik'izany, ary naiditra hopitaly maika ny telo taorian'ny heverin'ny manampahefana any an-toerana ho fandoavan-ketra amin'ny rafitra fiarovana amin'ny afo.
Ny mpiasan'ny vonjy taitra dia niaro ny trano ary namoaka ireo naratra.
Ny rafitra famonoana afo tao amin'ilay orinasa dia "niharan'ny fiparitahan'ny CO2 izay nahavoa olona efatra", hoy ny fanambaran'ny manampahefana Katalana.
Mpiasa telo tafavoaka tamin'ny fivoahana no eny amin'ny hopitaly ao Móra d'Ebre eo akaiky eo.
Tsy nisy taratra nivoaka tamin’ity tranga ity, araka ny nambaran’ny orinasa sy ny tompon’andraikitra any an-toerana.
Ny orinasa Asco in Katalonia dia nohadihadiana noho ny fiparitahan'ny taratra tao amin'ny réactor Unit 1 tamin'ny Novambra 2007, ka nandroahana ny taleny.